शान्ति र समाजवाद विरोधी उपनिर्वाचन हामी बहिष्कार गर्छाैः बिमल निरौला
1574 पटक पढिएको
गाेपाल किराँतीले नेतृत्व गरेकाे नेकपा माओवादी केन्द्रले दल दर्ता गरी चुनाव चिन्ह समेत लिइसकेकाे छ । चुनाव चिन्ह लिइसकेपछि पार्टी चुनावमा भाग लिन्छ भन्ने धेरैले अनुमान गरेका थिए । तर अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रले चुनावमा भाग नलिइ चुनाव बहिष्कार गर्ने बताउन थालेकाे छ । यसै सन्दर्भमा अाैजार दैनिकले नेकपा (माओवादी केन्द्र), एक नं. प्रदेश अध्यक्ष बिमल निराैलासँग गरेकाे कुराकानीः
तपाईहरुको पार्टी (माओवादी केन्द्र) को अगामी अभियान के छ ?
–मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचन शान्ति र समाजवाद विरोधी भएको हाम्रो पार्टीको यहि कार्तिक १–२ गते बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले ठहर गरेको छ । यो चुनावलाई देश व्यापी आम हड्ताल सहित सशक्त रुपमा बहिष्कार गर्ने अभियानमा छौं ।
उपनिर्वाचन कसरी शान्ति र समाजवाद विरोधी भयो ?
अब हुने निर्वाचन शान्ति र समाजवाद विरोधी नै हो । किनभने विप्लव नेकपा राजनीतिक शक्ति हो यसलाई सरकारले राजनीतिक व्यवहार गर्नुको साट्टो प्रतिबन्ध लगाएको छ । राजनीतिक विचार राखेकै आधारमा नेता कार्यकर्ताको हत्या गरेको छ, हिरासत र जेलमा कोचेर राखेको छ । यसरी उपनिर्वाचन गर्न खोज्नु भनेको शान्ति विरोधी हो । अब समाजवादको सवालमा भन्ने हो भने अहिलेको संविधानमा समाजवादउन्मुख भनेर उल्लेख गरिएको छ समाजवादउन्मुख स्वरुप मात्रले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, पहिचान आधारित जनवाद र जनजीविकाको अग्रगामी नेतृत्व दिन वस्तुतः असक्षम ठहरिएको छ त्यसैले संविधानको समाजवादी पुनलेर्खन गरी समाजवादउन्मुख संविधानलाई हटाएर वैज्ञानीक समाजवादी संविधान लेखिनु पर्दछ ।
निर्वाचनमा भाग लिनकै लागि भर्खरै तपाईहरुले पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेर चुनाव चिन्ह लिएको छ हैन ?
–हो, हाम्रो पार्टीको कार्यनीति चुनाव उपयोग नै थियो । प्रचण्ड समूहले भाडभैलो मच्चाएर पार्टीलाई तहसनहस बनाएर एमालेमा विलय भएपछि हामीेले संघर्ष गरेर पार्टी पुनर्गठन ग¥यौँ । पार्टीको महाधिवेश गरेर पार्टी ब्युत्याऔँ । निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गर्दै पुरानै चुनाव चिन्ह समेत लिन सफल भयौ । कानुनी आधारमा निर्वाचन आयोगले काम गरिदियो त्यसकालागि निर्वाचन आयोगलाई धन्यवाद दिइ सकेका छौ । हामीले यो उपनिर्वाचनलाई जनताको हितको पक्षमा बनाउन सरकार सँग १८ बुदँे माग पत्र असोज ३ गते पेश गरेका थियौँ जुन ओली नेतृत्वको सरकारले वास्ता समेत गरेन त्यसैले उपनिर्वाचन बहिष्कार गर्ने निर्णयमा पुग्यौँ ।
तपाईहरुको पार्टीको चुनाव वहिष्कार गर्ने शक्ति छ त ?
–प्रचण्डहरु एमालेमा विलय भएपछि हामीले पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापन डेढ वर्षको अवधिमा राम्रैसँग ग¥यौँ । अब हामी सडकमा निस्कदै छौँ । मंसिर १४ गते हुने चुनाव बहिष्कार गर्ने शक्ति हामीसँग छ । फेरी चुनाव बहिष्कार गर्ने हामी मात्र छैनौ मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादी, विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादी र ऋषि कट्टेल लगायतले नेतृत्व गर्नु भएको पार्टीहरु पनि छन । उहाँहरुसँग पनि छलफल गरेर सयुक्त रुपले बहिष्कार अभियानलाई सफल बनाउने छौँ ।
यस विषयमा वैद्य, विप्लव र ऋषि कट्टेलहरु सँग छलफल भइरहेका छ ?
– हाम्रो ४ पार्टीको कर्यगत एकता नै छ सोहि अनुसार हामीले राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको सवालमा विभिन्न कार्यक्रमहरु पनि सयुक्त रुपमा समपन्न गरेका छौ । चुनाव वहिष्कारको विषयमा वैद्य र ऋषि कट्टेलहरु संग घनिभूत छलफल भइरहेको छ । क.विप्लवले नेतृत्व गरेको पार्टी नेकपालाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको कारणले घनिभूत छलफल हुन नपाए पनि केहि छलफल भएको छ । यहाँहरुको नीति पनि चुनाव बहिष्कार नै हो भनेर तपाई हामी सबैलाई थाहा छ ।
तपाईहरुको पार्टीले सरकारलाई बुझाएको १८ बुदेँ मागमा के छ ?
– १८ बुदेँमा जनताको अधिकारका लागि संविधानको समाजवादी पुनर्लेखन आवश्यक रहेको ठहर छ । साझेदारीको नयाँ नेपाल संस्थागत गर्न उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र महिलाको सयुक्त राज्यसत्ता निर्माण तथा समाजवादी राष्ट्रिय एकिकरण गर्न पहल गर्नु पर्ने, क.विप्लवले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विरुद्ध असंवैधानिक प्रतिबन्ध तुरुन्त खारेज गरी त्यस पार्टीसँग राजनीतिक व्यवहार गर्नु पर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगाार आवास र खाधप्रभूता सम्बन्धी नागरिकको मौंलिक अधिकार कार्यान्वन दायित्व स्थानीय सरकारलाई प्रत्याभूत गर्नु पर्ने लगायतका मागहरु राखिएको छ ।
जनताले तपाईहरुलाई मत दिदैन भन्ने भएर चुनाव बहिष्कारको कुरा उठाउनु भएको हो भन्ने पनि छन नी ?
–त्यस्तो हुदै होइन, १० वर्ष जनयुद्ध गरेर परिवर्तनका लागि ठूलो वलिदान गरेर आएको पार्टीलाई जनताले मत नदिने कुरा नै हुदैन । मुख्य कुरा त यो प्रकारको चुनावले आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक लगायत विभिन्न तरिकले उत्पीडनमा पारिएको नागरिकहरुको हित हुदैन भनेर हामी चुनाव बहिष्कारमा लागेका हौं ।
उत्पीडनमा परेका नागरिकहरुको हितको लागि कस्तो प्रकारको चुनाव गर्नु परो त ?
–समग्र वर्गिय प्रतिनिधित्व अन्तर्गत पुर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । मजदुर–श्रमिक, कृषि श्रमिक र पँुजीपतिवर्गको जनसंख्या ठोस गरी पूर्ण समानुपाति निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । महिला र पुरुषको हकमा पनि यसै गर्नु पर्दछ । अस्तित्वका जातिहरुको जनसख्याको आधारमा पुर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली निश्चित गर्नु पर्दछ ।
तपाईहरु त पद नपाएर एमालेसँगको एकतामा नजानु भएको हो भनेहरु पनि छन् नी ?
–त्यो झुट्टो हो भने कुरा डवल नेकपाको दस्ताबेजले नै स्पष्ट पारेको छ । उनीहरुको दस्तावेजमा माओवादी केन्द्रले मान्दै आएको माओवाद र पहिचानको मुद्दाहरु छैनन् तर त्यसलाई हामीले छोडेको छैन अहिले पनि हामी माओवाद र पहिचानको पक्षमा छौं ।
भर्खरै चीनीयाँ राष्ट्रपति नेपाल भ्रमणमा आएको बेला नेपाल – चीन बीच भएको २० बुदे सहमति बारे पार्टीको धारणा के हो ?
त्यो मोटामोटी रुपमा ठीकै छ तर हाम्रो देशको सरकारले राष्ट्रियता प्रस्तुत गर्न सकेन । चीनियाँ राष्ट्रप्रमुख सि जीङपीङ आएको बेला पनि लिपुलेकको भूमि फिर्ता हुनु पर्दछ भने महत्वपुर्ण विषयनै उठाइएन । भारतीय शासकलाई खुशी बनाइ राख्न सीमा अतिक्रमणको विषय ओली नेतृत्वको सरकारले उठाउन नसकेको हो ।
पार्टीको अहिले सांगठनीक अवस्था चाही कस्तो छ ?
– प्रचण्ड समूह एमालेमा विलय भएपछि अस्तब्यस्त भएको (माओवादी केन्द्र) विस्तारै व्यवस्थित हुदैछ । अहिले चाहि हाम्रो सांगठनिक अवस्था ठीकै छ । यसलाई हामी निकै राम्रो बनाउन जुटेका छौ । संगठनलाई मजबुत बनाएर वर्गीय मुक्तीको आन्दोलनलाई टुङ्गोमा पु¥याउन सकिन्छ भन्ने विश्वास हामीमा छ ।
चिटिक्क बन्यो गुराँस मार्ग
मंसिर 16, 2077
धरान । धरान–८ स्थित गुराँस मार्ग पक्कि निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।मंगलबार संघिय सांसद् जयकुमार राईल�
सुनसरी क्षेत्र नं. एकका योजनामा बजेट छुट्याइयो (सूचीसहित)
धरान । स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत सुनसरी क्षेत्र नं. १ मा सञ्चालन हुने योजनाहरु
दुवै अध्यक्षको संयुक्त प्रतिवेदन आउनैपर्छ
मंसिर 15, 2077
धरान । पत्रयुद्ध गरेर एकअर्कामाथि आरोप लगाइरहेका सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेताहरु सचि
२४ घण्टामा प्रदेश १ मा ९२ संक्रमित थपिए, ५० जना डिस्चार्ज
भोजपुरमा सालकको खपटा सहित १ जना पक्राउ
मोरङ र पाँचथरमा सवारी दुर्घटना २ जनाको मृत्यु
जिल्ला नगरका अध्यक्षहरु सम्मानीत
२४ घण्टामा प्रदेश १ मा १७९ संक्रमित थपिए, ९२ जना डिस्चार्ज
फेरी बढ्यो सुनको मुल्य, हेर्नुहोस् प्रतितोलाको कति ?